Sayenzi Linux 7.8 yakatoburitswa, ziva kukosha kwayo kwakanyanya | Linux Vakapindwa muropa
Iyo itsva vhezheni yekuparadzirwa kweLinux "Sayenzi Linux 7.8" yakatoburitswa kare uye inouya nekuvandudzwa kwakasiyana siyana yeiyo iyo kuiswa kwemamwe mapakeji nyowani izvo zvinouya kuzovandudza zvimwe zvinhu muhurongwa. Iyi itsva vhezheni yeSainzi Linux 7.8 yakavakirwa pahwaro hweRed Hat Enterprise Linux 7.8 package uye inowaniswa nematurusi akagadzirirwa kushandiswa mumasangano esainzi.
Kune avo vasingazive neSainzi Linux, vanofanira kuziva izvozvo uku ndiko kugoverwa kweLinux bhanari padanho repamusoro reRed Hat Enterprise Linux kugovera, Yakanyorwa kubva kuRHEL kodhi kodhi, pasi pemitemo yeRHEL EULA uye rezinesi reGPL. Iyo inochengetedzwa neCERN, Fermilab, DESY uye ETH Zürich marabhoritari.
Misiyano maererano neRHEL ivo vanowanzo vira pasi kudzokorora uye kubviswa kweanobatanidza kune Red Hat masevhisi. Kunyorera-chaiko kunyorera, pamwe nekuwedzera madhiraivha, zvinopihwa zvekumisikidza kubva kune ekunze marekodhi senge EPEL uye elrepo.org.
Pakutanga, chirongwa ichi chakabhabhatidzwa seHigh Energy Physics Linux, ndokuzotumidzwa zita rekuti Scientific Linux, sezvo ichigamuchirwa nevazhinji vesainzi.
Kugoverwa uku kunoshandiswa muGreat Hadron Collider, Kune michina yeGCH komputa network.
1 Sayenzi Linux 7.8 Kiyi Nyowani Zvimiro
2 Dhawunirodha Sayenzi Linux 7.8
Sayenzi Linux 7.8 Kiyi Nyowani Zvimiro
Mune ino vhezheni itsva yeSainzi Linux 7.8 Inosvika zvichibva paRHEL 7.8 y inosvitsa dzimwe shanduko kumafaira ane marekodhi ekugadzirisa zvekunze (EPEL, ELRepo, SL-Zvimwe, SL-SoftwareCollections, ZFSonLinux) iyo yakaendeswa kunzvimbo yepakatisezvo izvi zvinyorwa zvisina kujeka kune mamwe mavhezheni uye zvinogona kushandiswa nechero vhezheni yeSainzi Linux 7.x.
Kuti utore dhata pamusoro pezvakachengetedzwa, ingo mhanya "yum gadza yum-conf-repos" uye wozogadzira zvinyorwa zvega, semuenzaniso, "yum gadza yum-conf-epel yum-conf-zfsonlinux yum-conf- softwarecollections yum-conf-hc yum-conf-yekuwedzera yum-conf -elrepo «.
Kune rimwe divi isu tinogona kuwana dzimwe shanduko mumapakeji, nekuti mune iyi nyowani vhezheni Python 3.6 inowedzerwa sezvo pakutanga Python 3 yanga isiri chikamu cheRHEL uye zvakare iro 2.x bazi rakamiswa.
Tinogona zvakare kuwana iyo package neOpenAFS, kumisikidzwa kuvhurwa kweiyo Andrew File System yakaparadzira faira system iyo SL_gdm_no_user_list package iyo inoremadza kuratidzwa kwerondedzero yemushandisi muGDM kana zvichidikanwa kutevedzera mutemo wakasimba wekuchengetedza, iyo SL_enable_serialconsole package kugadzirisa koni inoshanda kuburikidza neye serial port uye iyo package SL_no_colorls iyo inoremadza kuburitsa kweruvara mu ls.
Shanduko dzakaitwa ku mapakeji, anonyanya kuenderana nekumiswazve: anaconda, dhcp, grub2, httpd, ipa, kernel, libreport, PackageKit, pesign, plymouth, redhat-rpm-config, shim, yum, jongwe.
Zvichienzaniswa neScientific Linux 6.x bazi, mapakeji alpine, SL_desktop_tweaks, SL_password_for_singleuser, yum-autoupdate, yum-conf-adobe, thunderbird (inowanikwa muEPEL7 repository) haibatanidzwe kubva kumusana.
Chinhu ichochos (shim, grub2, iyo Linux kernel) uInoshandiswa pakuboora muEFI Yakachengeteka Boot mode yakasainwa neSainzi Linux kiyi, iyo, painogonesa yakasimbiswa bhuti, inoda mashandiro mashandiro, nekuti kiyi inofanirwa kuwedzerwa kune iyo firmware;
Kuisa zvigadziriso otomatiki, iyo yum-cron system inoshandiswa, panzvimbo peyum-autoupdate.
Nokusingaperi, zvigadziriso zvinoshandiswa zvinoteverwa zvichiteverwa neruzivo kumushandisi. Kuti uchinje maitiro pane otomatiki yekumisikidza nhanho, mapakeji SL_yum-cron_no_automated_apply_updates (inorambidza otomatiki kumisikidza yekuvandudzwa) uye SL_yum-cron_no_default_excludes (inogonesa kuiswa kweyakagadziridzwa neiyo kernel) yakagadzirirwa.
Dhawunirodha Sayenzi Linux 7.8
Mufananidzo wekuparadzira unopihwa iyo x86_64 dhizaini, muchimiro cheDVD mapakeji (9.9 GB uye 8.1 GB), pamwe nemufananidzo wakapfupiswa wekumisikidzwa kwenethiwekhi 627 MB.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Sayenzi Linux 7.8 yakatoburitswa, ziva shanduko dzakakosha kwazvo
Ndiri kufara kuti yadzoka, yakagara iri distro yakakura.
NixOS 20.03 inouya neKernel 5.4, KDE 5.17.5, Gnome 3.34, Pantheon 5.1.3 nezvimwe